Ungawulinganisa Kanjani Umphumela Wokusesha Kwe-Algorithm? | Martech Zone
ULwesibili, April 14, 2015 ULwesibili, April 14, 2015 Douglas Karr
Sithumele ngezinyathelo ezidingekayo ukuze gwema ukulahleka okuphawulekayo kwethrafikhi yokusesha ngosesho lweselula ku-Google eza ngesonto kusukela manje. Abangane bethu kwa-gShift bebelokhu bezibheke ngeso lokhozi izinguquko futhi bashicilela kakhulu okuthunyelwe okujulile ngomthelela olindelekile wezinguquko ze-algorithm.
Ukukala imizwa yabathengisi nokuqoqa imibono ngalolu shintsho olubalulekile, abakwa-gShift benze ucwaningo kubadayisi bedijithali abangaphezu kwama-275 ezimbonini ezahlukahlukene ezibandakanya ezokuthengisa, ezokuvakasha nezimoto. Sisebenzise lolu cwaningo phakathi kukaMashi 25 - Ephreli 2 futhi ngaphezu kwamaphesenti angama-65 ababambiqhaza babengabenzi bezinqumo ezisezingeni eliphakeme abanezihloko ezisukela kuMqondisi kuya ku-CMO. Izimpendulo esizitholile zikhombise imininingwane ethokozisayo yokuthi ochwepheshe bezimboni balulungiselela kanjani ushintsho lwango-Ephreli 21.
Ngokuthakazelisayo, ngaphezu kwengxenye yabo bonke abathengisi bedijithali bakholelwa ukuthi umthelela uzoba mkhulu… kepha okukhathaza kakhulu ukuthi labo abathengisi bedijithali abanazo izindlela zokubheka umthelela. Isoftware ye-gShift yobukhona bewebhu iqapha izinga lesiza sakho kusesho lweselula.
Futhi ungalungiselela inkampani yakho ushintsho lwe-algorithm ye-SEO ka-Ephreli 21st nge-gShift eyenziwe ngezifiso Umbiko wesilinganiso seBenchmark yeselula yokuthi ubukhona bakho bewebhu njengamanje buhlela kanjani kudeskithophu kuqhathaniswa neselula. Futhi qiniseka ukuthola idemo yengxenyekazi yabo - kuyamangaza impela!
Tags: April 21usesho lweselula lwe-googlei-google search search algorithmgshiftamazinga eselulausesho lweselulamobile seo